Press Release: “Thirty-two (32) children and young people released by the Myanmar Armed Forces” | UNIC Yangon
Press Release: “Thirty-two (32) children and young people released by the Myanmar Armed Forces”
Yangon, 31 March 2019 – Today, the Government of Myanmar released seven children and 25 young people who were recruited under the age of 18 by the Armed Forces (also known as ‘Tatmadaw’). This is the first discharge to take place in 2019 and underlines the importance of protecting children in the context of armed conflict and within the peace process.
Since June 2012, when the Myanmar government signedaJoint Action Plan with the United Nations to prevent recruitment and use of children in the Tatmadaw, 956 children and young people have been released by the army. The co-chairs of the UN Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) on Grave Violations against Children, Knut Ostby, the Acting United Nations Resident and Humanitarian Coordinator and June Kunugi, UNICEF Representative, welcome this latest discharge as ‘another encouraging step by the Government towards ending and preventing the recruitment and use of children within the Tatmadaw’.
The children and young people discharged will benefit from reintegration programmes to help them get back into civilian life, seize new opportunities for their own development and contribute to bringing lasting peace in Myanmar as productive citizens of their country.
The CTFMR commends the Government for the progress made towards completion of the Joint Action Plan, including through the centralization of the recruitment process, the establishment of more robust age assessment procedures, and the issuance of military directives prohibiting child recruitment and setting standards for military personnel conduct. Efforts have also been made to disseminate these standards to all military personnel and disciplinary measures are taken against those violating these directives.
The CTFMR continues to work with the Government to systematically end and prevent the recruitment and use of children in the Armed Forces inasustainable manner. Remaining measures include strengthening the legal framework through the expected upcoming adoption of the Child Rights Law and the ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the involvement of children in armed conflict (which the Government signed in 2015), further reinforcing prevention mechanisms to avoid any new cases of underage recruitment, and systematically releasing suspected minors when they have no or inconsistent documentation to verify their age, in line with the principle of the “benefit of the doubt”.
In December 2018, the Government invited the Office of the Special Representative of the Secretary General on Children and Armed Conflict (SRSG CAAC) to facilitate training for Tatmadaw personnel and Government officials from relevant ministries on the six grave violations of children’s rights, with support from the CTFMR. Additional training on this topic is expected to take place in 2019. Another recent positive development was the establishment by Presidential Order in January 2019 of the inter-ministerial Committee for Preventing Grave Violations against Children in Armed Conflict.
The CTFMR looks forward to engaging with the newly established committee to start developing, signing and implementing joint action plans to prevent and respond to the two additional violations that Tatmadaw was listed for in the Secretary General’s 2017 Annual Report on Children and Armed Conflict, namely “killing and maiming” and “rape and other forms of sexual violence”.
The CTFMR remains committed to working closely with the Government in its efforts towards completion of the Joint Action Plan to sustainably end and prevent further recruitment and use of children by the Tatmadaw.
In addition to the Tatmadaw, there are seven non-state armed groups listed by the UN Secretary-General as being ‘persistent perpetrators’ in the recruitment and use of children in Myanmar. They are the:
1. Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)
2. Kachin Independence Army (KIA)
3. Karen National Liberation Army (KNLA)
4. Karen National Liberation Army Peace Council (KNLA-PC)
5. Karenni Army (KA)
6. Shan State Army South (SSA-S)
7. United Wa State Army (UWSA)
ABOUT THE UN COUNTRY TASKFORCE ON MONITORING AND REPORTING (CTFMR) ON GRAVE VIOLATIONS AGAINST CHILDREN
United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1612 mandates the UN to establish UN-led CTFMRs in countries where there is verified evidence that Grave Violations against children are being committed by parties toaconflict, either by armed forces and/or by armed groups. The CTFMR is tasked with establishingaMonitoring and Reporting Mechanism (MRM) which documents, verifies and reports to the UNSC on Grave Violations against children. The six Grave Violations that are monitored and reported are:
· killing or maiming of children
· recruitment and use of children in armed forces and armed groups
· attacks against schools or hospitals
· rape or other grave sexual violence
· abduction of children
· denial of humanitarian access for children
The CTFMR is also mandated to provideacoordinated response to such grave violations. The CTFMR was established in Myanmar in 2007 and is co-Chaired by the UN Resident Coordinator and the UNICEF Representative in Yangon. The CTFMR in Myanmar includes relevant UN agencies (ILO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN OCHA, the UN RCO and WFP), Save the Children and World Vision.
In November 2013, UNICEF supported the Myanmar Government to launchanation-wide campaign to raise awareness of its population on its commitment to end recruitment and use of children by Tatmadaw. As part of this campaign, and on behalf of CTFMR, UNICEF and World Vision are managingahotline with two phone numbers (09-421166701 and 09-421166702) where anyone can alert and report suspected cases of children being recruited or used by the Tatmadaw. The hotline is operational 24 hours per day, seven days per week.
Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, Stanislav.saling@one.un.org
Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; fyilma@unicef.org
Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; hoo@unicef.org
အရွယ်မရောက်မီ စစ်မှုထမ်းဆောင်နေသူ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ် (၃၂)ဦးအား မြန်မာ့တပ်မတော် မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မတ်လ (၃၁)ရက် – မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ တပ်မတော်တွင်အရွယ်မတိုင်မီစစ်မှု ထမ်းဆောင် နေသည့် ကလေးသူငယ် (၇)ဦးနှင့် လူငယ် (၂၅)ဦးအား ယနေ့ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ယခုနှုတ်ထွက် ခွင့်ပြုခြင်းသည် ၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋ္ဋိပက္ခအတွင်းကလေးသူငယ်များအားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးသည် အရေးကြီးကြောင်းထင်ရှားစေပါသည်။
၂၀၁၂ခုနှစ်၊ ဇွန် လကတည်းကပင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ ကုလသမဂ္ဂနှင့်အတူပူးတွဲ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု စီမံချက် (Joint Action Plan)ကို စတင်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ထိုအချိန်မှစ၍ ယနေ့အထိ ကလေးသူငယ်နှင့် လူငယ်စုစုပေါင်း (၉၅၆)ဦးကို တပ်မတော်က နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ယခုနှုတ် ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းကို ‘ကလေးသူငယ်များအား တပ်မတော်အတွင်းဝင်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းမှတားဆီးရပ်တန့်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သည့် အားရဖွယ် နောက် ထပ် ခြေလှမ်းတစ်ခု’ အဖြစ် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှု များအား စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရေး နိုင်ငံ အလိုက် အထူးတာဝန် အဖွဲ့(CTFMR)၏ ပူးတွဲဥက္ကဌများ ဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး (ယာယီ )Knut Ostby နှင့် ယူနီဆက်မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် June Kunugi တို့က ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုလိုက်ကြသည်။
နှုတ်ထွက်ခွင့်ရရှိသည့် ကလေးသူငယ်များနှင့်လူငယ်များသည် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင် သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် သာမန်အရပ်သားဘဝကို ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ၎င်းတို့ ကိုယ် တိုင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်သာမက နိုင်ငံသားကောင်းများအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိပြီး အဓွန့် ရှည်ရန် လုပ်ဆောင်ရာမှာ ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ဗဟို ထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့် တပ်မတော်စစ်သားစုဆောင်းရေး လုပ်ငန်းများအတွင်း အသက်စိစစ်ရေး လုပ်ဆောင်မှု များအား တွန်းအားပေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် CTFMR က ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ရပြီး အရေးပါသည့် ကာကွယ် တားဆီးရေးနည်းစနစ်ကို နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ရန် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အမှုထမ်းများအား ယင်းနည်းစနစ်များအား မျှဝေပြီး ချိုးဖောက်မှုများအား ယင်းစနစ်နှင့် အညီလိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားရန် တိုက်တွန်းလိုက်ရသည်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁ရာစု ပင်လုံ) တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ကလေးသူငယ် အခွင့် အရေးများဆိုင်ရာ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအား တားဆီးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ် ငန်းစဉ် အတွ င်း အရေးပါသည့် ကဏ္ဍတခု အဖြစ်ပါဝင်ကြောင်းကို ကလေးသူငယ်အခွင့် အရေးများဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ သဘောတူညီချက်စာချုပ်နှင့်အညီ ကလေးသူငယ်များ၏ အခွင့်အရေးများ ခိုင်မာစေရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုအချက်ခြောက်ရပ်အား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းသွားရန် လုပ်ငန်းများ အား ကတိကဝတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကလေးသူငယ်များအား တပ်မတော်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတို့မှ တားဆီး ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်များအား စနစ်ကျစွာ ရေရှည်လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ရန် CTFMR သည် နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့်အတူ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းနည်းစနစ်များ အတွ က် မူဘောင်များခိုင်မာစေရန် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခွင့် အလမ်းသစ်များ ဖြစ်သည့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေး ဥပဒေပြဌာန်းခြင်း၊ အသက်အရွယ် တိကျစွာသိရှိနိုင်ရန် လုံလောက်သည့် အထောက်အထား အချက်အလက်များမရှိသည့် ကလေးငယ်များအား “benefit of the doubt” – “သံသယ အကျိုးခံစားခွင့်” စနစ်ဖြင့် စနစ်တကျ ပြန်လည်လွတ်မြောက်ခွင့်တို့ပါဝင်သည်။
CTFMR ၏ ပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများအတွက် ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှုအချက် ခြောက်ရပ်နှင့်ပက်သက်ပြီး သင်တန်းပေးကူညီရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှးချုပ်၏ ကလေးသူငယ်နှင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၌ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။ ယင်းသင်တန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ထပ်မံတိုးချဲ့သင်တန်း အား ပို့ချရန် ယခုနှစ်အတွင်းခန့်မှန်းထားပါသည်။ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများအတွင်း ကလေးသူငယ်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှုများအား ကာကွယ်တားဆီးနိုင်မည့် အစိုးရဌာနများပါဝင်သည့် ကော်မတီ ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ သမ္မတအမိန့်အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်မှာလည်း ဂုဏ်ယူဖွယ် တိုးတက်မှု တခုပင်ဖြစ်သည်။
“ကလေးသူငယ်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း(သို့ )သတ်ဖြတ်ခြင်း” နှင့် “အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း (သို့) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခြင်း” စသည့်ကိစ္စရပ်များကြောင့် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ၏စာရင်း၌ ပါဝင်နေသည့် တပ်မတော်အနေဖြင့်ယင်းကိစ္စရပ်များအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသွားနိုင်ရန် CTFMR အနေဖြင့် ယင်းကော်မတီနှင့် ထိတွေ့ပြီး ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ချက်များအား အတူတကွ အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း၊ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းသည်။
CTFMR သည်လုပ်ငန်းစီမံချက်အား အောင်မြင် တည်တံ့စွာပြီးဆုံးသွားနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တပ်မတော်အတွင်း ကလေးသူငယ်များ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေမှုများမှ တားဆီးကာကွယ်သွားရန်လည်း လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားလိုက်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှးချုပ်၏ စာရင်း၌ ပါဝင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် “အရွယ်မရောက်သေးသူများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ” –
၁. ဒီကေဘီအေ Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)
၂. ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် ဖွဲ့  Kachin Independence Army (KIA)
၃. ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ Karen National Liberation Army (KNLA)
၄. ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်ဖွဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ Karen National Liberation Army Peace Council (KNLA-PC)
၅. ကရင်နီတပ်ဖွဲ့ Karenni Army (KA)
၆. ရှမ်းပြည်နယ် တပ်ဖွဲ့တောင်ပိုင်း Shan State Army South (SSA-S)
၇. ”ဝ” ပြည်နယ် ညီညွတ်ရေး တပ်ဖွဲ့ United Wa State Army (UWSA)
CTFMR နှင့်စပ်လျဉ်း၍ နောက်ခံ အချက်အလက်
လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၌ ပါဝင်သောအဖွဲ့အစည်း (တပ်မတော် နှင့်/သို့မဟုတ် လက်နက်ကိုင် အုပ်စုများ) က ကလေးသူငယ်များအပေါ် ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများ ကျူးလွန်သည်ဟု စစ်ဆေး အတည်ပြုပြီး သက်သေ အထောက်အထား တွေ့ရှိရသော နိုင်ငံများတွင် ကုလသမဂ္ဂက ဦးဆောင်သော CTFMR တည်ထောင်ရန် ကုလသမဂ္ဂနှင့် အခြားကလေးသူငယ် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့အစည်းများအား ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၆၁၂ အရခွင့်ပြုထားပါသည်။ CTFMR ၏ တာဝန်မှာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး နှင့် အစီရင်ခံတင်ပြရေးအစီအမံ (MRM) တည်ထောင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခတွင် ကလေး သူငယ်များအား တပ်သားအဖြစ် စုဆောင်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း အပါအ၀င် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများ ကြီးလေးသောချိုးဖောက်မှုများအား မှတ်တမ်းပြုစုခြင်း၊ စစ်ဆေး အတည်ပြုခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ သို့  အစီရင်ခံ တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။
လုံခြုံရေးကောင်စီသို့ အစီရင်ခံတင်ပြသည့် ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကြီးလေးသော ချိုးဖောက်မှု (၆) ရပ် –
ကလေးသူငယ်များကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း(သို့)သတ်ဖြတ်ခြင်း
လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ကလေးသူငယ်များကို တပ်သားအဖြစ် ခေါ်ယူစုဆောင်း အသုံးပြုခြင်း
စာသင်ကျောင်း (သို့) ဆေးရုံများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း
ကလေးသူငယ်များအတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီများ မရောက်ရှိအောင်တားဆီးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
CTFMR မှ ကြီးလေးသည့် ချိုးဖောက်မှုများကို ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်လျက် တုံ့ပြန်ရန်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းခြင်း ခံထားရပါသည်။ CTFMR ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ယူနီဆက်မြန်မာဌာနေကိုယ်စားလှယ်တို့က ပူးတွဲ ဥက္ကဌများအဖြစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ CTFMR အဖွဲ့တွင် ကုလအဖွဲ့များဖြစ်သည့် UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA နှင့် WFP စသည့်အဖွဲ့များနှင့် World Vision, Save the Children တို့ ပါဝင်ပါသည်။
၂၀၁၃ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ယူနီဆက်အနေဖြင့် တပ်မတော်တွင် ကလေးသူငယ်များကို တပ်သားအဖြစ် ခေါ်ယူစုဆောင်း အသုံးပြုခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရေးအတွက် ၎င်းတို့ ၏တာဝန်ယူမှုကို ပြည်သူလူထုအကြား အသိ တရား နှိုးဆော်ပေးရန် အတွက် နိုင်ငံအနှံ့ လှုပ်ရှားမှု တစ်ရပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်CTFMR အဖွဲ့ကိုယ်စား ယူနီဆက်နှင့် World Vision တို့က ကလေးသူငယ်များကို တပ်မတော်မှ တပ်သားအဖြစ်ခေါ်ယူစုဆောင်းသည့် မသင်္ကာဖွယ် ကိစ္စရပ်များ တွေ့မြင်ရပါက မည်သူမဆို ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား သတင်းပို့ နိုင်မည့် အရေးပေါ်ဆက်သွ ယ်ခေါ်ယူ အကြောင်းကြားနိုင်မည့် ဖုန်းလိုင်းနှစ်လို င်း (၀၉- ၄၂၁၁၆၆၇၀၁ နှင့် ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကို တပ်ဆင်ပေးနိုင်ခဲ့သည။်
ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
This entry was posted in Uncategorized on April 1, 2019 by Wynn Lei Lei Than.
← Press Release: UNODC‐supported Alternative Development Coffee from Myanmar launched in French Parliament Next Post →